Ukudlala njani Khetha iiChords ezincinci kwiUkulele kwakho
44 104 ezimhlophe ezijikelezileyo
Ukukhetha okuncinci kumculo waso nasiphi na isixhobo- hayi nje ukulele - kuthathelwa ingqalelo njengezinto ezimnyama, ezikrwada. Kodwa ii-chord ezincinci zikunceda ukuba wenze umculo omnandi, onemoya, ke sukubagxotha.
Zonke izimbo zinenguqulo encinci, eboniswe ngonobumba omncinci 'M' emva kwegama lomculo: C une-C encinci (Cm), i-G7 ine-G encinci 7 (Gm7), njalo njalo.
Ukuzama i-chord encinci kwi-ukulele yakho
Umncinci yinto elula elula ukuqala ngayo kuba ifuna umunwe omnye: umnwe wakho ophakathi kumtya we-g kwi-fret yesibini. Ke beka nje umnwe wakho kumtya we-g kunye nomtya ukwenza le chord; Isandla sakho kufuneka sijongeka ngoluhlobo:
Umzobo we-chord ujongeka ngoluhlobo:
Ukudlala umdlalo omncinci ku-uku ukulele
I-D encinci chord ifana kakhulu ne-F chord, njengoko umzobo we-chord ubonisa:
Ukukhathazeka i-D chord ngo
Ukubeka isalathiso somnwe wakho kumtya we-E kwi-fret yokuqala.
Ukonakalisa umtya we-g kwi-fret yesibini ngomnwe wakho ophakathi.
ingcambu yomjelo ebantwaneni
Sebenzisa umsesane wakho ukukhathaza umtya we-E kwifreythi yesibini.
Iminwe yakho kufuneka ijongeke ngolu hlobo:
Ukujikisa i-E encinci kwi-ukulele yakho
Ukudlala u-Em, kuya kufuneka ungene kwi-fretboard. Qala ngokubeka isalathiso sakho somnwe kumtya we-A kwi-fret yesibini. Emva koko yibhulorho ngapha nangomnwe wakho ophakathi ukuze udlale umtya we-E kwifreythi yesithathu. Emva koko yiza nomnwe wakho wokudlala ukuze udlale umtya we-C kwifreythi yesine, njengoko umzobo we-chord ubonakalisa:
Ngenxa yokuba yomibini iminwe yakho ephakathi kunye neyesangqa iringi ngaphezulu kweminye imitya, u-Em unokuba yinto ekhohlisayo ukuze ulunge. Xhuma umtya ngamnye ngokwahlukeneyo ukuze uqiniseke ukuba uvakala ngokucacileyo ngaphandle kokubhuza.
I-strep throat vs tonsillitis
Imifanekiso ye-generic xanax
isebenza njani zofran
Loluphi uhlobo losulelo olunyangwa yi-clindamycin